वर्षा मौसममा चामल र गेडागुडीमा किरा लाग्न कसरी नदिने ? « Lokpath
वर्षा महिनामा मौसम ओसिलो हुन्छ, जसको कारण धेरैको घरमा राखेको चामल र गेडागुडीमा किरा पर्ने गरेको होला रु यस्तो अवस्थामा चामल र गेडागुडीलाई फ्याँक्न पनि सकिँदैन भने केलाएर पकाएर खान पनि सकिँदैन । त्यसैले वर्षा महिनामा चामल र गेडागुडीमा सकभर किरा पर्न नदिनु नै राम्रो हुन्छ । यसरी चामल र गेडागुडीमा किरा लाग्न नदिने केही अचुक घरेलु उपायहरू पनि नरहेका होइनन् । जसलाई तपाईँहरूले प्रयोग गरेर चामल गेडागुडीलाई सुरक्षित रूपमा किरा लाग्न नदिई अरू बेलाको जस्तै पकाएर विना हिचकिचाहट खान सक्नुहुन्छ ।
चामल र गेडागुडीलाई वर्षाको मौसममा किरा लाग्न वाट जोगाउने हो भने ल्वाङको प्रयोग पनि उपयोगी मानिन्छ । चामल र गेडागुडी राखेको भाँडो ९बट्टा वा बोरा० मा १५–२० वटा सिङ्गो ल्वाङ राख्नुहोस् । यसरी ल्वाङ राख्दा दुई वटा फाइदा हुन्छ । एउटा चामल र गेडागुडीमा किरा लागेको छ भने ल्वाङको सुगन्धले किरालाई भगाउँछ भने अर्को तर्फ किरा लाग्नबाट समेत चामल र गेडागुडीलाई जोगाउँछ ।
तेज पात र निमको पातको प्रयोग
वर्षाको मौसममा चामल र गेडागुडीमा किरा पर्नबाट जोगाउने हो भने चामल र गेडागुडी राखेको भाँडोमा निम वा तेज पातको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तेज पात वा निमको १०–१५ वटा सुकेको पातलाई चामल र गेडागुडी राखेको भाँडोमा राखिदिनु भयो भने अनाजमा किरा पर्न दिदैंन ।
वर्षाको मौसममा चामल र गेडागुडीमा किरा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । चामल र गेडागुडीलाई किरा लाग्न नदिने अर्को उपायमा फ्रिज पनि रहेको छ । कुनै हावा नछिर्ने बट्टामा चामल र गेडागुडी राखेर फ्रिजमा राख्नु भयो भने पनि चामल र गेडागुडीमा किरा पर्दैन ।
चामल र गेडागुडीमा किरा पर्ने समस्या छ वा वर्षा महिनामा किरा पर्नबाट चामल र गेडागुडीलाई जोगाउन चाहनु हुन्छ भने सलाईको प्रयोगबाट पनि सक्नुहुन्छ । चामल र गेडागुडी रहेको बट्टा वा बोराको छेउछाउमा प्रयोग नगरेको काँटी भएको सलाईलाई राख्दा पनि चामलमा किरा पर्दैन । सलाईमा सल्फर भएको कारण यसको गन्धले चामलमा लाग्ने किरालाई लाग्न वा हुर्किन दिँदैन ।
यदि चामल र गेडागुडीमा किरा लागेको छ वा वर्षाको मौसममा किरा लाग्ने सम्भावना छ भने लसुनको पोटीलाई नछोडाई बोक्रा सहित नै बोरा वा भाँडोमा चामल र गेडागुडीसँग मिसाएर राखिदिए हुन्छ । यसरी राख्दा लसुन सुकेको खण्डमा त्यसलाई हटाएर नयाँ राख्ने गर्दा चामल र गेडागुडीमा लामो समयसम्म किरा लाग्न दिँदैन ।
प्रकाशित मिति: २०७८,श्रावण,११,सोमवार ०४:३०
#किरा लाग्न नदिने
सधैँ पैदल हिँड्ने गर्नुहोस् यस्ता छन् फाइदाहरू
डा. हेमराज कोइराला I लामो आयु बाँचेकाहरूको दीर्घजीवनका रहस्यहरू केलाउँदै जाने हो भने उनीहरू लामो उमेरसम्म बाँच्नुको मुख्य कारण पैदल
के हो गेस्ट्रेक्टोमी?
हाइलाइट्स गेस्ट्रेक्टोमी केलाई भनिन्छ? चिकित्सकले कस्तो अवस्थामा गेस्ट्रेक्टोमी अप्रेसन गर्ने सल्लाह दिनसक्छन्? गेस्ट्रेक्टोमी कस्ले गर्नुहुन्न?शल्यक्रिया अघि उल्लेखित विषयहरुमा ध्यान राख्न
खोप लगाउन आनाकानी : के कोरोनाविरुद्धको खोपले गर्भपतनको जोखिम निम्त्याउँछ ?
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राखी विश्वभर कोरोनाविरुद्धको खोपको रफ्तार बढाइएको छ । स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुका अनुसार खोप लगाएका
प्याङगाउँ : न प्याङ न गाउँ (भिडियोसहित)
नाम सुन्दै नौलो । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका-११ मा अवस्थित यो सानो नमूना गाउँ अर्थात् प्याङगाउँ । ललितपुरको लगनखेलस्थित बसपार्कबाट करिब